ဗိသုကာ, ပန်းပု | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကလေးများဂရိဘုရားတို့ကိုအကူအညီနဲ့၏တိုတောင်းတဲ့စာရင်းထဲမှာလိုအပ်ပါတယ်? အဆိုပါဝီကီပီးဒီးယားဆောင်းပါးအိုလံပစ်-တပါးသောဘုရားတို့ကိုကြည့်ပါ။ ရှေးဟောင်းဂရိဘုရားတို့ကိုမရဏနိုင်ငံ, သေလွန်သောသူတို့သည်၏နိုငျငံတျော၏အုပ်စိုးသောမင်းကို။ နေရောင်ခြည်၏ Apollo ဘုရား။ ဟေလသလူတစ်ဦးချောမောနုပျိုသောသူကဲ့သို့သူ့ကိုပုံဖော် ... ။
မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအမျိုးအစားများ ... သူတို့ကဘယ်လိုအမျိုးအစားရှိပါသလဲ
မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအမျိုးအစားများ ... သူတို့ကဘယ်လိုအမျိုးအစားရှိပါသလဲ http://forum.tr.ru/read.php?2,453003,476262 စစ်တုရင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသာရှေးခေတ်များမှာနှစ်ခုလမ်းများ (ပေကျင်း, ကျိုတို), သို့ရာတွင်ဤအမျိုးအစားများ၏လမ်းဆုံမှာရှေးခေတ်အခြေချနေထိုင်မှုများဆောက်လုပ်ရေးထ ...
ရုရှားရှိရှေးအကျဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းလား? ဘယ်လောက်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီလဲ ဘယ်မြို့မှာလဲ Great Novgorod ရှိ Saint Sophia ဘုရားရှိခိုးကျောင်း။ ၁၀၄၅ - ၁၀၅၀ ။ နံပါတ် ၁၀၆၊ တကယ့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း # ၇၆၉၊ ရိုင်ကော့ဗ် (အပျိုစင်မာရိ၏ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဘုရားကျောင်း)၊
ငါ့ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်မှု 18 ရာစုအပေါ်တစ်ခုခုကိုပြောပြပါ
မစ္စတာ Yves # 18;; Novichev အဆိုပါ slider ကို # 769; ငါ့ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်မှု 769 ရာစု Yves # 769 အပေါ်တစ်ခုခုပြောပြပါ (မတ်လ 14 1728, 27 မေလ 1766 Yekaterinburg, Barnaul), ရုရှားတီထွင်သူအတွက်, ရုရှားအတွင်းပထမဆုံးရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် ...
ခေါင်းစဉ် "မက်ဆေ့ခ်ျကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဘာလဲ" ပေါ်တွင်သတင်းစကား?
ခေါင်းစဉ် "မက်ဆေ့ခ်ျကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဘာလဲ" ပေါ်တွင်သတင်းစကား? Moltsy ဂရိသည်သမိုင်းဝင်အတိတ်နှင့်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာထုံးတမ်းစဉ်လာများရှိသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဂရိနိုင်ငံတွင်ရှေးခေတ် Hellas ၏လှပသောအထိမ်းအမှတ်များစွာ၊ ယင်း၏သိပ္ပံ၊ အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ...
ဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်ကဘာလဲ? အဘယ်သူသည် pliz raskazhite သူ့ကိုအကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုသိတယ်
ဒီလက်ဝါးကားတိုင်ကဘာလဲ? ဘယ်သူကသိတယ်၊ အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အားပြောပြပါ Ankh - ရှေးအီဂျစ်တွေထဲမှာအထင်ရှားဆုံးအမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ Crooks Ansata ။ ဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်နှစ်ခုစည်းလုံးညီညွတ်နေကြသည် ...
ဘယ်နှစ်ယောက်ပုတီးတစ်ဦးကောင်းစွာအတွက်ဖြစ်သင့်သလဲ သငျသညျ 108, 54, 27, 21 သို့မဟုတ် 18 ပုတီးများအတွက် chtki အကောင့် nuzhny.Buddiyskie အဘယ်အရာကိုအကဲခတ်။ ဟိန္ဒူ chtki ပုံမှန်အား 108, 54 50 သို့မဟုတ်ပုတီးပါရှိသည်။ တစ်ဦးကမွတ်စ်လင် ...
ဝေါဟာရတွေကဘာလဲ။ ရောမဗွိတိတ်ခွန်များ Thermae - ဂရိရှိအိမ်များနှင့်အားကစားရုံများပါ ၀ င်သောရှေးဟောင်းဗာများ၊ ဂရိစနစ်ကာလအတွင်းမြို့သူမြို့သားများအားလုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရှေးခေတ်ရောမမှာ ...
ကမ္ဘာ၏အံ့ 8 ဖွယ်ရာ ၈ ချက်ကားအဘယ်နည်း။ Priora ကမ္ဘာ၏အThe္ဌမအံ့သြဖွယ်ရာသည် Jordan.wikipedia ရှိ Petra မြို့ဖြစ်သည်။ org / wiki / Petra (နေရာလွတ်ကိုဖယ်ရှားပါ) link သည်စီမံကိန်းအုပ်ချုပ်ရေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ net / entry / 1215 ru.wikipedia ကိုဖယ်ရှားပါ။ org / wiki / Eighth_World Wonder (နေရာဖယ်ရှားပါ) ...
အဆိုပါ caryatids အဘယ်သူနည်း
caryatids ဘယ်သူတွေလဲ http://ru.wikipedia.org/wiki/Karyatida KARIATI # 769; ဟုတ်သည် (ဂရိ kariatis“ သစ်အယ်သီး” သို့မဟုတ်“ Kariysk”၊ ဂရိတောင်ပိုင်း Arcadia နှင့်နယ်စပ်အနီးရှိ Laconia ရှိ Kariya မြို့မှတောအုပ်နတ်ဘုရားမ၏ပုံ) သစ်တောinရိယာများတွင်လေးစား ...
Gothic အဘိဓါန်ကဘာလဲ? အယူအဆစတိုင်
Gothic ဆိုတာဘာလဲ? ပုံစံ၏အယူအဆ Gothic style (အီတလီမှ။ Gotico, lit. - Gothic, ဂျာမန်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသည်။ ) အနုပညာစတိုင်သည်အနောက်နိုင်ငံများအလယ်ခေတ်၏အနုပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သော ...
တစ်ဦး pilaster, mauerlat, ချိုင့်ဝှမ်းကဘာလဲ?
pilaster, Mauerlat, endova ကဘာလဲ? PILASTERS - နံရံ၏ထောင့်မှန်စတုဂံပုံတစ်ခုတွင်၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ကော်လံတစ်ခု၏ပုံစံ။ ENDOVA - ရှေးအချိန်ကစပျစ်ဝိုင်၊ ဘီယာနှင့် mash၊ သတ္တု၊
Baiterek ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ကမ္ဘာ့နေရာဒေသတွင်ကမ္ဘာ့မြစ်စီးဆင်းနေသည့်ဒဏ္legာရီများအရရှေးဟောင်းခြေသလုံးကြွယ်ဝသောဘိုင်သရက်သစ်ပင်နှင့်၎င်း၏တည်နေရာနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်း၏ကမ်းခြေပေါ်သို့ ...
အဘယ်အရာကိုသရုပ်မှန်ပါသလဲ ... realist တို့အမြင်တစေ့တစောင်းပန်းချီ, စာပေ, ဒဿနအတွက်ဖြစ်ပါတယ် ... သငျသညျအဘယျသို့? # 769 Imple; GP, ညှနျကွားခညွှန်ပြရန်အသုံးပြုအတွေးအခေါ်အသုံးအနှုန်းများ၏အတွေးအခေါ်ထဲမှာ, သိရှိဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ်မှန်လွတ်လပ်သော၏တည်ရှိမှု postulates ။ # 769 Imple; မိသားစုဆရာဝန်ညှနျကွားခ ...
အသီနာကားမည်သူနည်း ရှေးဟောင်းဂရိစစ်ပွဲနှင့်ဉာဏ်ပညာနတ်ဘုရားမ အသီနာသည်ရှေးဂရိဂရိနတ်ဘုရားမ၊ စစ်မြေပြင်၊ လက်မှုပညာများဖြစ်သည်။ အမည် Minerva အောက်မှာရောမ Pantheon ၌တည်၏။ E သင်္ကေတများ - ဇီးကွက်၊ ဒိုင်း၊ လှံနှင့်နွား။ အသီနာသည် ...
လန်ဒန်၏မျှော်စင်၏ဇာတ်လမ်းကဘာလဲ? လန်ဒန်၏မျှော်စင်၏ဇာတ်လမ်းကဘာလဲ? အဆိုပါမျှော်စင်အဆောက်အဦး၏အခြေစိုက်စခန်းထဲကနေနှင့်၎င်း၏အကျဉ်းသားဂရုတစိုက်ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အထူးသဖြင့်ရှေးခယျြသောနန်းတော်ကိုယ်ရံတော် 1485 နှစျတှငျထငျရှားလေ၏။ ထိုကာလ၌ ...
ဗိသုကာများ၏ Gothic အဘိဓါန်စတိုင်ရဲ့ features တွေကိုစာရင်းပြုစု ကျေးဇူးပြု.
အဓိကအားဖြင့်ဘုရားကျောင်း, ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အသင်းတော်များ, ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၏ဗိသုကာ၌ထင်ရှားဗိသုကာ Gothic အဘိဓါန်စတိုင်လ်၏ Gothic အဘိဓါန်စတိုင်ရဲ့ features တွေကိုစာရင်းပြုစုပါ။ Romanesque ပိုမိုတိကျစွာ Burgundian ဗိသုကာများ၏အခြေခံပေါ်မှာတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Romanesque မတူဘဲ ...
အဲဒီမြေညီထပ်ကိုဆိုလိုသည်?! ဒါမှမဟုတ်မြေအောက်ခန်း။ ကျနော်တို့ကကောက်ချက်ဆွဲရန်ဤအရပ်, ထိုအဆောက်အဦး၏တစ်ဦးမြေအောက်ခန်း))) မြေအောက်ခန်း Cap-စုရုံးအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများဖြစ်ခဲ့သည်, မြေကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ အကြမ်းအားဖြင့်စကားပြော, ဒီတူညီတဲ့မြေအောက်ခန်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် ...
စိန့် Basil ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတည်ဆောက်ဘယ်သူနည်း
စိန့် Basil ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတည်ဆောက်ဘယ်သူနည်း စိန့် Basil ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း (15551561) သခင်နှစ်ဦး Postnik Barma တည်ဆောက်ခဲ့, ဒီမှာက 1552 တစ်ဦးထက်ပိုသောပြည့်စုံသောဇာတ်လမ်းဖြစ်လိမ့်မည်, အိုင်ဗင်၏တပ်များကြောက်မက်ဘွယ်သောမြို့တော်လွှဲပြောင်းယူ ...
ပုံ Kivshenko, စစ်ဂိမ်း Petra 1 Kozhukhovo များ၏ရွာအနီးရှိတပ်များ amusing အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။
ပုံ Kivshenko, စစ်ဂိမ်း Petra 1 Kozhukhovo များ၏ရွာအနီးရှိတပ်များ amusing အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အေဒီ Kivshenko သမိုင်းစစ်တိုက်မြင်ကွင်းများ၏လယ်ပြင်၌၎င်း, ရှုခင်းအတွက်တင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအားလုံးအရောင်များကိုအသုံးပြုသည် ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,328 စက္ကန့်ကျော် Generate ။